Deastroyed symbols of USDP Chinthaes (lions) by earth quake | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Jammae’ Mosque destroyed in Kyaukpyu
မြန်မာမီဒီယားပေါင်းနုတ်ဖို့ခဲ »
King Bodawpaya (1782–1819) arrested four famous Burma Muslim Maulvis (Imams) from Myedu and killed them in Ava, the capital, after they refused to eat pork.[ Yegar, Moshe The Muslims of Burma:aStudy ofaMinority Group, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1972; p. 12, paragraph 3] According to the Myedu Muslim and Burma Muslim version there were seven dark days after that execution and the king later apologized and recognized them as saints.[ Yegar Muslims; p. 12, paragraph 3][ Siddiq Khan, M., “Captain George Sorrel’s Mission to the court of Amarapura, 1793-4″, Journal of the Asiatic Society of Pakistan (Dacca); II (1957), pp. 132-140]Wikipedia
Tags: Amarapura, Aung San Suu Kyi, Burma, Minority group, Muslim, Myedu, National League for Democracy, Otto Harrassowitz, Rakhine people, Rohingya people, Shwe Mann, Thein Sein, Union Solidarity and Development Party
This entry was posted on November 11, 2012 at 4:37 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Deastroyed symbols of USDP Chinthaes (lions) by earth quake”
November 12, 2012 at 6:24 am | Reply
ဂေါတမဗုဒ္ဓ ရဲ့ ဝစနတော်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပိဋကတ်
သုံးပုံ ထဲ က ဒီဃနိကာယ်၊ မဟာဝဂ်ပါဠှိ၊ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၊ ၁၇၁
အဲဒီ မှာ ဂေါတမဗုဒ္ဓ က ညီတော်
အာနန္ဒာ ကို ဘယ်လို ဟောကြားသလဲ ဆိုတော့……
အာနန္ဒာ မြေ (ငလျင်) ပြင်းစွာလှုပ်ခြင်း၏အကြောင်းအထောက်အပံ့
“အာနန္ဒာ ဤမဟာပထဝီမြေကြီးသည်ရေ၌တည်၏။ ရေသည်လေ၌တည်၏။
လေသည် ကောင်းကင်၌တည်၏။ အာနန္ဒာ ထန်စွာလေတိုက်သောအခါရေကို
လှုပ်စေကုန်၏။ ရေလှုပ်သောမြေကိုလှုပ်စေ၏။ ဤကား မြေ (ငလျင်) အကြီး
အဲဒီအတိုင်းဆိုရင် မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလွှင်က မဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြည်သူတွေကို လိမ်လည်နေတာပေါ့..
ဂေါတမက ပဲ အမှားတွေ ပြောလား..မိုးလေ၀သပညာရှင်ကပဲ ရွှီးနေလား…ပြောကြပါဦးဗျာ